Iadaptha yombane-yeJack eza kufika nge-iPhone 7 | IPhone iindaba
UPablo Aparicio | | iPhone 7
I-iPhone elandelayo, enokubizwa ngokuba yi-iPhone 7 okanye, ngokwentlebendwane yakutshanje, i-iPhone 6SE, iya kuba yeyona iphambili kwi-apula ye-apula ukusukela oko yasungulwa ngo-2007. Iya kuba kungenxa yokuba uyilo lwayo luya kuba, kunyaka wesithathu ngokulandelelana njengaleyo ye-iPhone 6, kodwa eyona nto igxekwa ngabasebenzisi abaninzi iya kuba kukungabikho kwezibuko lehedfoni eyi-3.5mm. Ukumamela umculo kwi-iPhone elandelayo uyakufuna iseti yentloko yeBluetooth, iseti yentloko enesidibanisi sombane okanye, kule ndawo sikuyo, Iadaptha yeLignthing-Jack.
Amarhe amaninzi kunye nabahlalutyi bathi loo Lightning-Jack iadaptha izakufakwa kwibhokisi ye-iPhone 7/ 6SE. Kodwa ingaba iadaptha eyenzelwe nguApple ingabonakala njani? Kulungile imvube.vn ithi, kwaye ipapashiwe kule mifanekiso ilandelayo, ukuba iadaptha ye-Apple's Lightning-Jack iya kuba nentambo encinci kwaye, kwiziphelo zayo zombini, umbane oyindoda kunye ne-3.5mm yebhinqa. Kungenzeka njani ukuba ngenye indlela ivele kwiApple, yonke iadaptha imhlophe.
Iadaptha yombane kaJack enokubakho
Iadaptha esibonisa imeko yeVietnam ijongeka kakhulu njengezinye izixhobo esinokubona kuyo nayiphi na iVenkile yeApple, kodwa inokuba iyinyani. Eyona nto ibambe umdla wam ngumfanekiso olandelayo:
Ndihlala ndicinga ukuba iApple ilungelelanisa konke ukuvuza. Ukuba ndilungile kwaye iApple ilawula lonke ulwazi oluza kuthi kwangaphambi kwexesha, athini la mathontsi amanzi kumfanekiso ongentla? Ngaba kwakunzima kakhulu ukuzomisa ngaphambi kokuthatha ifoto? Ezo mvula zinokuba sisalathiso esiza kubakho kwi-iPhone 7 into evikela amanzi ngokusemthethweni.
Akukho nanye kwezi evela kule mifanekiso, kodwa kufuneka sithethe ngengxaki yokutshaja i-iPhone ngelixa umamele umculo. Ngokwam, andizukuqonda ukuba ngekhe sizenze zombini ngaxeshanye, okanye ngaphandle kokuthenga enye iadaptha okanye iDock. Siza kubona oko basibonisa kona ngoSeptemba, kodwa ngekhe kube kuhle ukuba basinikezela ngerhafu yokwenene engenazingcingo ekuthethwa ngayo ngamarhe athile?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 7 » Ngaba le yiadaptha yombane-kaJack eza kufika nge-iPhone 7?
Ndine-5S ye-iPhone iminyaka eliqela kwaye indihambela kakuhle, ke andinanjongo yokuyihlaziya nge-iPhone 7. I-iPhone "entsha" ibiza ingqalelo yam ngakumbi kwixabiso lokusebenza.
Kuya kufuneka sizibone iindaba eziza ne-iPhone elandelayo, kodwa ndicacile ukuba andizukuchitha idlelo le-iPhone enoyilo olufanayo kwi-6S nangaphantsi ukuba iqinisekisiwe ukuba iminqwazi iya uqhagamshelwe kunye neadaptha kwizibuko lombane.
Ngaphandle kokuba zibandakanya izinto ezintsha ezihamba ngaphandle kweentambo ezihambelana ne-USB. Kum, ayisosizathu sokuhlaziya, ibhetri enkulu kancinci, ikhamera ebhetele, inkumbulo engaphezulu, amandla, iprosesa, njl. Ukusukela ngoku sendiphawule, i5S yam iyabhabha ngoku kwaye ineminyaka emi-3 ubudala.
Ndiyathemba ukuba ndiphosakele kwaye ngo-Septemba bazisa i-iPhone entsha eyahlukileyo kule siyilindeleyo, kodwa amahemuhemu asasaza ukuphinda-phinda i-6.
Makhe sibone ukuba yintoni le nto ekugqibeleni ...
IVodafone yam ihlaziywa yoyilo olutsha